Uxhumano nezimiso zokuxhumana akuzona ngokuqinile nje ezimpilweni zethu. Basuke ngokujulile ngakho egxilile ke ukuthi abantu abavamile Kunzima ukucabanga ngokwezinga yokusabalalisa yabo. Yini inethiwekhi yokuxhumana futhi izinhlelo ukushintsha tisebenta futhi ahlinzeke ukudluliswa kwedatha emhlabeni namuhla, yini umehluko zabo, yiziphi amathemba? Yilokhu Kuzoxoxwa.
Kulokho izinhlobo zokuxhumana ezikhona, ngaphandle kokwazisa ngisho umfundi omncane ukuphendula. Nokho, thina ubhekisele kuwo. Ngakho ngesikhathi samanje, isintu esebenzisa lezi zinhlobo ezilandelayo zokuxhumana (uqaphele ukuthi ukubala ukuthatha zilwane kuphela, ezidinga ukusetshenziswa imishini kanye / noma imishini, ngamanye amazwi, ezokuxhumana)
Telephone (Kusho yezintambo ngocingo, landlines).
Radio zokuxhumana, kubandakanya okusakaza.
Kepha bokusebenza ukudluliswa ethile uhlobo lolwazi, ke lo msebenzi ngokwayo kuthatha Uxhumano lwenethiwekhi futhi usuke uhlelo. Kule ndaba, inethiwekhi kufanele ukusekela ukudluliswa kolwazi ngendlela leyehlukile. umsebenzi ukushintsha amanethiwekhi - ukuhlinzeka isixhumanisi phakathi ethize inethiwekhi ababhalisile. Ngamanye amazwi, kuba uhlelo usuke kuqinisekisa ukuthi iqoqo izinombolo zokubhalisa, imishini ukuqondisa ucingo lwakho kuye, hhayi nje 'bangayeki "ucingo isiteshi zokuxhumana. It ugesi oxhumene amakhompyutha noma ababhalisile yocingo futhi abenzele isiteshi nokujabulela wonke zokuxhumana.
Ensimini ka eziyinkimbinkimbi amanethiwekhi zokuxhumana belive lakitsi kanye usuke izinhlelo athuthukile ngokuhambisana nemithetho kahulumeni kanye nohlelo BCC (vseuvyazannoy kwenethiwekhi) we CIS. Izinjongo inethiwekhi - ukuqinisekisa ukutholakala esiphezulu zonke izinhlobo zokuxhumana izakhamuzi lamazwe Commonwealth. Ngesisekelo kule nethiwekhi - le usuke ISIZINDA ezinkulu ezisebenza kwimodi okuzenzakalelayo kanye amasignali kabusha, kanye ne-computing izikhungo, ogama umsebenzi - iqoqo idatha nokuhlaziya. The main kwenethiwekhi futhi ukushintsha izinhlelo ukuthi ukusekela ukudluliswa kolwazi ku-BCC:
Iziteshi yocingo ezenzekelayo.
Amanethiwekhi ukuhlinzeka yezokusakaza umsindo.
Ngefeksi ukuxhumana kwenethiwekhi.
amanethiwekhi Ikhompyutha namanethiwekhi idatha.
mobile zokuxhumana uhlelo.
Izingxenye ezisemqoka Uxhumano lwenethiwekhi: uhlelo usuke, inethiwekhi ezinkulu iziteshi (imigqa), okuyothi idatha idluliselwa ezahlukene imishini chweba nokucubungula efanele amasignali engenayo, izisebenzi asekelayo operability kanye zalezo zinkinga ezindaweni ezithile zokuxhumana imigqa.
Ayini amathemba esikhathi esizayo ukuthuthukiswa lokhu kuthambekela? Amacebo Ministry of Communications uthuthukise sezingcingo ukuze abasebenzisi bayo ukufinyelela wonke amakhono izinhlelo mobile - umbhalo kanye multimedia imiyalezo, ikhono ikholi yevidiyo. ukunakwa okuningi ikhokhelwa ubuchwepheshe obungenawaya be-futhi tindlela tekuchumana (uqale - 3G 4G nezakhiwo). Ngo iphrojekthi esikhathini esizayo unegama - NGN. Ngaphezu kwalokho, ezinye zezici zalo kakade kufana nokuthi uzama ukusebenza amanethiwekhi ezikhona.